I-Uganda ilawula ukuHanjiswa kweZilwanyana zasendle ngombane, igcina uKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » I-Uganda ilawula ukuHanjiswa kweZilwanyana zasendle ngombane, igcina uKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda • Iindaba ezahlukeneyo
E-Uganda elawula ukuHanjiswa kweZilwanyana zasendle
I-Ofisi yoKhenketho, i-Wildlife kunye ne-Antiquities yase-Uganda namhlanje, nge-29 kaJulayi, ngo-2021, iphehlelele inkqubo yokuqala yokuvumela umbane ukulawula urhwebo lwezilwanyana zasendle kunye neemveliso zasendle kweli lizwe.
Ngaphantsi komxholo othi "Ukomeleza uMmiselo woRhwebo lweZilwanyana eziZinzileyo."
Oku kufezekiswa ngeemvume zekhompyuter kunye neelayisensi zorhwebo (ukungenisa elizweni, ukuthumela kwelinye ilizwe kunye nokuphinda uthumele kwelinye ilizwe) kwiimpawu.
Le mizekelo idweliswe kwiNgqungquthela yoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe kwiZilwanyana nezilwanyana eziseMngciphekweni wezilwanyana zasendle (CITES).
I-Uganda ngoku iba lilizwe lokuqala eMpuma Afrika kunye ne-8 kwilizwekazi lase-Afrika ukuphuhlisa inkqubo ye-elektroniki yeCITES.
Ukuphuhliswa kwenkqubo yokuvumela elektroniki kuxhaswe ngabantu baseMelika phantsi kwe-United States Arhente yoPhuculo lwaMazwe ngaMazwe (i-USAID) / Uganda yokulwa ulwaphulo-mthetho lwasendle (CWC) ngenkqubo ye-Wildlife Conservation Society (WCS) ngokusebenzisana noMphathiswa wezoKhenketho, Izilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala.
Ukuphehlelelwa kwamodareyithwa nguGqirha Barirega Akankwasah, PhD, uMkomishinala woLondolozo lwezilwanyana zasendle kunye noMlawuli oBambeleyo weSebe lezoKhenketho lwezilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala (MTWA), kwifomathi ye-intanethi kunye nomzimba. Ababekho yayingumphathiswa wezokhenketho lwezilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala, ohloniphekileyo uTom Butime, owayekhokele ukusungulwa; uNobhala osisigxina, uDoreen Katusiime; Inxusa laseMelika eUganda, uNozakuzaku uNatalie E. Brown; kunye neNtloko yeGunya laseYurophu eUganda, Unozakuzaku u-Attilio Pacifici. UHaruko Okusu, iNtloko yeProjekthi, ukwazile ukumela i-CITES Secretariat phantse.
Ethetha kulo msitho, uMmeli uBrown ubalule iiprojekthi ezixhaswa yi-USAID ukulwa urhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni kuquka neCanine Unit eKaruma Wildlife Reserve, apho kuqeqeshwa izinja kwaye zixhotyiselwe ukuthintela iimveliso zasendle kwingingqi.
U-Ambassia uPacifici ugxeke ukutshatyalaliswa kwehlathi kubandakanya iBugoma ukuya kwiswekile yorhwebo ekhula yiHoima Sugar Limited kunye neZoka Forest kubalimi abagawuli ababetyelelwe ngabathunywa be-EU ngo-Novemba 2020 kwaye babhala ngokutshatyalaliswa ngemifanekiso yesathelayithi. Ihlathi laseBugoma yindawo yokuhlala yaseUganda Mangabey, kwaye iZoka Forest yindawo ehlala iFlying squirrel. Omabini la mahlathi abesembindini wephulo eliqhubekayo lokulwa neenqwelomoya zabaphangi bomhlaba kunye nezinto ezikhohlakeleyo kwiiofisi eziphakamileyo.
UHaruko Okusu, Unobhala weCITES, uqaphele ukuba “… Amaphepha-mvume sesinye sezixhobo eziphambili zokubeka esweni urhwebo kwiindidi ezidweliswe kwiCITES kwaye kubalulekile ukuqonda ubungakanani borhwebo lweCITES. Inkqubo yaseUganda ifuna ukuqinisekisa inyathelo ngalinye lokugcinwa kwabo. ”
Ugqirha Barirega unike imvelaphi malunga nokusayinwa kweUganda emva koko kubandakanya ukutolikwa kwesiHlomelo I, II, no-III kwiNdibano kudweliso lweentlobo zezilwanyana ezinikwe amanqanaba ohlukeneyo okanye iintlobo zokuzikhusela ekusetyenzisweni gwenxa.
Uthe, njengeGunya loLawulo lweCITES, iSebe lezoKhenketho laseUganda, iZilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala ligunyazisiwe ukuba liqinisekise ukuba urhwebo kuluhlu lweCITES kunye nolunye uhlobo lwezilwanyana zasendle luzinzile kwaye lusemthethweni. Oku kwenziwa phakathi kwezinye iindlela ngokukhutshwa kwamaphepha-mvume e-CITES kwisindululo se-Uganda Wildlife Authority kwizilwanyana zasendle; Icandelo loMphathiswa Wezolimo, Imizi-mveliso Yezilwanyana nokuloba ngeentlanzi zokuhombisa; kunye neCandelo loMphathiswa wezaManzi kunye nokusiNgqongileyo kwizityalo ezinemvelaphi yasendle. Luxanduva lwezazinzulu lwe-CITES ukuqinisekisa ukuba urhwebo, ingakumbi iintlobo zezilwanyana okanye zezityalo, aluyongozi ekusindeni kweentlobo endle.
Kude kube ngoku, i-Uganda njengamanye amazwe amaninzi ibisebenzisa inkqubo esekwe ephepheni yokukhutshwa kwezatifikethi kunye nokukhutshwa kwemvume, enokuthi ithambekele ekwenzeni izinto ezingekho mthethweni, kuthatha ixesha elininzi ukuqhubekeka nokuqinisekisa, kwaye ekufikeni kwe-COVID-19, ukuhanjiswa kwamaxwebhu kunokuba ube ngumngcipheko wokudluliselwa kwezifo. Ngenkqubo ye-elektroniki, iindawo ezahlukeneyo zeCITES kunye neearhente zogcino-mthetho zinokuqinisekisa kwangoko imvume kwaye babelane ngolwazi lwexesha lokwenyani kurhwebo lwezilwanyana zasendle. Oku kuyakuthintela urhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni olusongela abemi bezinye zezilwanyana zasendle ezinjengendlovu, ngaloo ndlela kusingelwa phantsi ingeniso yezokhenketho e-Uganda kunye nokhuseleko lwesizwe.
UJoward Baluku, iGosa lezasendle kwi-Ofisi yoMphathiswa wezoKhenketho, iZilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala, ubonise inkqubo ekwi-intanethi ebonisa ukuba umntu kufuneka enze njani Ngena iziqinisekiso zabo ngekhonkco kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho lwezilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala ethatha umenzi-sicelo ngenkqubo yobhaliso ngaphambi kokuba aqinisekiswe kwaye aqinisekiswe.
I-Arhente yase-United States yoPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe (i-USAID) / i-Uganda yokulwa ulwaphulo-mthetho lwezilwanyana zasendle (i-CWC) ngumsebenzi weminyaka emi-5 (ngoMeyi 13, 2020-Meyi 12, 2025) omiliselwe yi-Wildlife Conservation Society (WCS) kunye nomanyano lwamaqabane kubandakanya i-African Wildlife Foundation (i-AWF), iNethiwekhi yezixhobo zoLondolozo lweNdalo (NRCN), kunye neRoyal United Services Institute (RUSI). Injongo yalo msebenzi kukunciphisa ulwaphulo-mthetho lwezilwanyana zasendle eUganda ngokuqinisa amandla abantu abachaphazelekayo be-CWC ekufumaneni, ekunqandeni, nasekutshutshiseni ulwaphulo-mthetho lwezilwanyana zasendle ngokusebenzisana ngokusondeleyo kunye ne-arhente zokukhusela kunye nokuthotyelwa komthetho, i-USAID ephumeza amaqabane, iinkampani zecandelo labucala kunye noluntu oluhlala kufutshane. kwiindawo ezikhuselweyo.
INgqungquthela yoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe kwiZilwanyana nezilwanyana ezisengozini yokuCinywa (CITES) yasayinwa ngomhla we-3 kweyoKwindla ngo-1973, yaqala ukusebenza ngoJulayi 1, 1975. . I-Uganda, iqela kwindibano ukusukela nge-16 ka-Okthobha ka-1991, ichonge uMphathiswa wezoKhenketho, iZilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala njengeGunya loLawulo lweCITES ukuze lilawule inkqubo yamaphepha-mvume kunye nokulungelelanisa ukuphunyezwa kweCITES eUganda. I-Uganda ikhethe i-Uganda Wildlife Authority; Icandelo loMphathiswa Wezamanzi Nokusingqongileyo; Icandelo loMphathiswa wezoLimo, iMizi-mveliso yezokuLoba nezokuloba libe yi-CITES Abasemagunyeni kwezeNzululwazi ngezilwanyana zasendle, izityalo zasendle, kunye nentlanzi yokuhombisa ngokulandelelana kwabo ukunika iingcebiso zesayensi malunga neziphumo zorhwebo kulondolozo lweentlobo endle.
IsiCwangciso-qhinga soPhuhliso lweSitofu sokugonya i-Omicron siyabhengezwa ngoku